Fanokafana fankalazana faha-5 taona SA Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Fandaharana I3V Fileovana – LIMOGES 21&22 may 2016
Fivoriana voalohan’ny Faribohitra efatra – Pentekosta 2016
Fanokafana fankalazana faha-5 taona SA
Fanokafana faha-5 taona Sekoly Alahady FLM Orléans – Katekista RAJOHARISON – Sary: RAKOTOSON Vola
Nisokatra ny Alahady 26 aprily 2016 teo ny fankalazana ny faha-5 taonan’ny Sampana Sekoly Alahady eto amin’ny Fiangonantsika. ANDROM-BAVAKA ho an’ny Sekoly Alahady rahateo io fotoana io ka dia nandray anjara feno tamin’izany ireo mpampianatra sy Biraon’ny Sekoly Alahady (fitarihana, vakiteny, toriteny) ary ireo mpianatra Sekoly Alahady.
Ny teny Faneva dia izay ao amin’ny Jaona 8:31, « Raha maharitra amin’ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa ».
Io no teny efa niainan’ny Sekoly Alahady nanomboka tamin’ny Krismasy 2015, ka izao izy hanamarihana ny fankalazana ny faha-5 taonany izao.
Teny am-pidirana dia nizara tenin’Andriamanitra ho an’ny mpiara-mivavaka ireo mpianatra, tahaka izay atao amin’ny andro fankalazana lehiben’ny Sampana.
Taorian’ny Toriteny no nihiran’ny Sekoly Alahady ny hira Faneva izay nosoratan’i Rtoa RAKOTOSON Vola, ary narindran’Atoa RAKOTOSON Nari.
Loka fotsy ambony mainty ambany moa no fanamiana nahitàna ny Sekoly Alahady manontolo tamin’izany, izay notarihan’ny Raiamandreny Katekista RAJOHARISON Maurice. Izy rahateo no nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny fanokafana izany fankalazana izany.
Nandray fitenenana ho fisaorana sy fanentanana ary fampahafantarana ny fankalazana ny faha-5 taonan’ny Sekoly Alahady ny Filoha, Rtoa ANDRIANASOLO Sylvania. Tamin’izany no nilazàny fa ny ivon’ny fankalazàna dia hotanterahina ny Alahady 29 may 2016, izay ALAHADIN’NY SALOMA, iraisana eo amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Hisy fampiratiana sy vokatra amin’io andro io ankoatra ireo hetsika izay mbola holazaina miandàlana: fizarana mari-pankasitrahana, sns…
Ny famaranana ny fankalazana kosa dia ny Alahady 10 jolay 2016, amin’ny fametrahana ny tsangambaton’ny faha-5 taona sy hetsika manokana.
Ny namaranana ny fotoana nandritra io Fanokafana ny faha-5 taona io dia EFITRANO MAINTY, sarimihetsika nanasàna ny Fiangonana manontolo, nijerena ny tantaran’ny Famoronana sy ny tantaran’i Jesosy, araka ny niainan’i Maria Magdalena azy (mpianatr’i Jesosy).
Ny Sekoly Alahady FLM Orléans dia misaotra sy mankasitraka antsika rehetra nitondra am-bavaka izany fotoana izany. Manasa ihany koa antsika rehetra amin’ny hetsika rehetra izay mbola ho ataony ho fanohanana ny asan’i Jesosy ao amin’ny Sekoly Alahady mandritra ny taom-pankalazana.
Raha mila fanazavana fanampiny na hitondra fiaraha-miasa manokana, dia manatona ny Filoha na ireo mpampianatra isanisany. Fifaliana no ifandraisana aminao. Eo am-piandràsana ny ivon’ny fankalazana dia tsarovy am-bavaka ny Sekoly Alahadin’i Jesosy eto amintsika.